बन्ला त बोल माया २ ? प्रकाश सपुतले यस्तो खुलासा गरे (भिडियो) - Enepalese.com
बन्ला त बोल माया २ ? प्रकाश सपुतले यस्तो खुलासा गरे (भिडियो)
इनेप्लिज २०७५ असार १८ गते २२:२७ मा प्रकाशित
बोलमाया गीतका सर्जक तथा गायक प्रकाश सपुतले बोलमाया गीतको दोस्रो भाग तत्कान नआउने बताएका छन् । उनले भनेका छन् बोलमाया गीतको भिडियो आफैमा पूर्ण छ । यसलाई अब कसरी दोस्रो भागको रुपमा ल्याउने त्यसको बारेमा सोचेको छु तर तत्कालै त्यो बजारमा आउँदैन ।
एक अन्र्तवार्ताको क्रममा उनले बोल माया गीतको अडियो बन्नु पूर्व नै भिडियोको कन्सेप्ट बनाएको समेत खुलासा गरे । भिडियो बनाउँन धेरै दुःख गरिएको स्मरण गर्दै सपुत भन्छन्–यो गीतले यति धेरै सथान पाउला जस्तो लागेको थिएन’ । उनले बाल्यकालमा गाउँकै मेलामा पनि यस्तो बियोगान्त गीतहरु गाएको स्मरण गरे ।
उनीसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस्